Akwụkwọ kacha mma foto maka ndị okenye | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ eserese na-emetụtakarị ụmụaka na-ege ntị nke na-ahụ akụkọ kachasị amasị ha yana eserese mara mma. Agbanyeghị, oge gbanwere na ịchọ akwụkwọ eserese site na ọha toro eto abụrụla omume nke ndị ọkaibe na ndị nkwusa kwughachiri. Dị ka ihe atụ, ndị a na-esonụ akwụkwọ foto kacha mma maka ndị okenye nke ahụ ga - eme ka ị rọọ nrọ n’etiti mkpụrụedemede na eserese.
1 Starry Night, nke Jimmy Liao dere
2 Otu narị afọ nke ịnọrọ onwe onye (mbipụta nke Illustrated), nke Gabriel García Márquez dere
3 Seda (mbipụta ederede), nke Alessandro Barrico na Rebecca Dautremer dere
4 Ndị enyi m niile anwụọla, site n’aka Jory John na Avery Monsen
5 Ndị hụrụ n'anya, nke Ana Juan dere
6 Ndị kwagara, nke Shaun Tan dere
7 The metamorphosis (mbipụta ederede), site n'aka Franz Kafka
8 Ihe nke ịhụnanya, nke Flavita Banana dere
9 Bosco: Akụkọ dị ịtụnanya banyere Hieronymus, okpu, azu paaki na bọọlụ, nke Thé Tjong-Khing dere
Starry Night, nke Jimmy Liao dere
M na-echeta mgbe akwụkwọ a ruru m aka afọ ole na ole gara aga. Otu akụkọ nke metụtara nwa agbọghọ ndị nne na nna ya chefuru, bụ ndị chetara "oge ọkọchị nke abalị kachasị ama nke kachasị mma" nke ya na otu nwa okorobịa dị omimi nọrọ. Ma ọ bụ na n'agbanyeghị àgwà ya, ọ bụ nwata, Abalị nke kpakpando jupụtara na ya es akuko nke na-arafu umuaka na ndi okenye otu ekele maka ụzarị ọkụ X-nwata ya na ihe atụ nke tankị azụ agbajiri agbaji, nwamba ukwu na ndapụta nrọ. Mgbe ọtụtụ afọ na-arụ ọrụ maka magazin dị iche iche dị ka onye na-ese foto na leukemia nke achọpụtara na 1995, Jimmy Liao onye Taiwan O kpebiri ịrara onwe ya nye na akwụkwọ ederede nke ga-eme ka ndị chefuru anwansi nke eziokwu n'onwe ha rọọ nrọ.
Otu narị afọ nke ịnọrọ onwe onye (mbipụta nke Illustrated), nke Gabriel García Márquez dere
Ihe nke Akwụkwọ Random House na-eji uru afọ 50 nke akwụkwọ nke Afọ isii nke owu ọmụma afọ gara aga, ihe atụ version nke Gabo's magnum opus features ihe osise nke onye na-ese ihe na Chile bu Luisa Rivera na ụdị edemede nke nwa nwoke onye edemede, Gonzalo García Barcha mepụtara. Mbipụta nke ga-emetụta ndị niile gakwara obodo ahụ nke Macondo furu efu n'etiti ndị mmụọ na ndị na-akụ banana ebe anyị na-agba akụkọ banyere Buendía saga.
Seda (mbipụta ederede), nke Alessandro Barrico na Rebecca Dautremer dere
Na 1996, onye Itali Alessandro Barrico bipụtara Seda, akụkọ ịhụnanya nke mere ka ọ bụrụ akwụkwọ njem nke na-ekwu maka njem nke otu onye ahịa French nke aha ya bụ Hervé Joncour gaa n'otu ọdọ mmiri dị egwu na Japan. Otu n'ime akwụkwọ akụkọ kachasị ere nke 90s o kwesịrị ya ụdị nkọwa ya, na mbipụta nke Contempla, yana ọrụ site na onye okacha amara nke French bu Rebecca DautremerỌ bụ ihe na-enye obi ụtọ, nke uri na ihe na-adọrọ adọrọ nke na ọ na-eme ka ịchọrọ ịhapụ ihe niile wee banye na ịchọ silkworms ndị ahụ ama ama.
Ọ ga-amasị gị ịgụ ihe atụ nke Seda?
Ndị enyi m niile anwụọla, site n’aka Jory John na Avery Monsen
Ọ bụrụ na ị bụ dinosaur, ndị enyi gị niile anwụọla. Ọ bụrụ na ị bụ osisi, ndị enyi gị niile aghọrọla okpokoro osisi. N'ime peeji 96 nke Ndị enyi m niile anwụọla, ndị dere ya ha na-agagharị n’etiti ụjọ na ọchị n'ụzọ dị ịtụnanya, na-akpọ onye na-agụ ya ka o chegharịa ịdị adị site n'akụkọ ihe mere eme nke clowns, zombies ma ọ bụ teepu cassette. Na Spen, ụdị nsụgharị nke Norma Editorial bipụtara ma nwee akụkụ nke abụọ, Ndị enyi m niile ka anwụọla.
Ndị hụrụ n'anya, nke Ana Juan dere
Na 2010, Ana Juan malitere akụkọ na Paris na emegharị iri na otu poems nke asatọ oyiyi nke ọ bụla n’ime ya ka akụkọ ịhụnanya dị iche iche dị na ya: nke nwoke nwere ihe npaaka, nke ụmụ nwanyị abụọ ma ọ bụ nke nwanyị agadi nwanyị na-atụsi anya ike nwata. Akụkọ ndị na-ekpuchi isiokwu sitere na ikwesị ntụkwasị obi na agụụ site na ntọala na ederede dị iche iche na ịdị nro nke ga-erute eriri nke onye na-agụ ya. Ihe odide na ihe onyonyo na-akpali akpali bụ nke Juan, onye mmeri nke National Illustration Award na 2010.
Echefula Ndị hụrụ n'anya, nke Ana Juan dere.
Ndị kwagara, nke Shaun Tan dere
A maara dịka "ezigbo onye na-ese foto" na obodo ya bụ Perth, Shaun Tan bụ onye na-ese ihe atụ nke na-etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọha na eze dị ka ụgbọala iji weta akụkọ ya na ndụ. Ihe atụ kachasị mma bụ nke a kwadoro Ndị kwabatara, akwukwo katuunu-ụdị oyuyo na agwakọta ha onwe ha fantasy ụwa na Mpaghara nke kwabatara na-abata na ntọala ọhụrụ. Ihe osise na-esighi na ederede ndị na-eme ka ụwa niile nwee mmetụta nke owu ọmụma na ụjọ nke na-emetụta ndị ahụ niile bịarutere mba ọzọ. Ọrụ nke onye na - agụ ya n'onwe ya gbakwunyere akụkọ ihe mere eme nke ihe oyiyi ndị ahụ, na - akpata mmegharị akụkọ na-adọrọ mmasị.
The metamorphosis (mbipụta ederede), site n'aka Franz Kafka
Weere dị ka otu n'ime nnukwu akwụkwọ nke narị afọ nke iri abụọThe metamorphosis na-akọ banyere Gregorio Samsa, onye ahịa ákwà nke biliri otu ụbọchị wee ghọọ ahụhụ. Ihe atụ nke otu ọgbọ, nke na-enyocha ma chọọ n'okpuru usoro nke ndụ na-agụsi agụụ ike ịchọta ihe, mbipute nke Antonio Santos Lloros gosipụtara na-agbakwunye iji tinyekwuo echiche na akụkụ ka otu n'ime akụkọ ndị kachasị ọhụrụ n'oge anyị. Obi abụọ adịghị ya, otu n'ime akwụkwọ kachasị atụ atụ aro maka ndị okenye, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị masịrị ọrụ Kafka.
Banye n'imembipụta a gosipụtara nke The Metamorphosis?
Ihe nke ịhụnanya, nke Flavita Banana dere
Mara amara mgbe ọ gbasara netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta Instagram nke ọ na-abata karịa 381.000 ndị na-eso ụzọ, Flavita Banana bụ onye na-ese ihe site na Barcelona onye jidere na katuunu ya njiko ọchị na nkatọ. Nwanyi di iche-iche, ihe osise nke Banana na-abanye n'ime echiche ụmụ nwanyị banyere onwe ha, egwu ha, echiche na mmekọrịta site na echiche acid, n'ihu ọha. Onye na-ese foto maka mgbasa ozi dị ka El País, onye edemede ahụ na-anakọta na Ihe nke achọ akụkụ nke egwuregwu ndị na-eme ka a mara ya n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Bosco: Akụkọ dị ịtụnanya banyere Hieronymus, okpu, azu paaki na bọọlụ, nke Thé Tjong-Khing dere
Site na mgbọrọgwụ ndị China na Indonesian mana bi na Netherlands, Onye na-ese foto Thé Tjong-Khing gbanwere ọrụ kacha mma nke Bosco iji kọwaara gị akụkọ a nke ga-atọ nwata na okenye ụtọ. Otu akụkọ nke Hieronymus na-agụ, otu nwatakịrị nwoke nke na-aga igwu egwu ma mechaa daa na ọdọ mmiri site na ugwu, na-efunahụ okpu ya, akpa azụ na bọl. Otu njem nke anyị na-ahụ maka ihe ndị anwansi ndị dị n'okpuru mmiri na nke sitere na mbara igwe nke otu n'ime nnukwu ndị na-ese akụkọ ihe mere eme anyị.
Na-egwu mmiri n'ime ụwa nke Hieronymus Bosch: Akụkọ dị ịtụnanya banyere Hieronymus.
Kedu akwụkwọ eserese kachasị mma maka ndị okenye ị ga-akwado?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ kacha mma foto maka ndị okenye